Uummanni Oromoo baldhaan kunii fi sabni Oromoo guddichi kun firoottan biyyoota alagaa hedduu hin qabu. Firoottan dhugumatti fira Oromoo tahan keessaa, Dr. Paxter tarree duraa irratti kan argamu. Abbaan keenya, kabajamaan kun umurii isaa guutuu waayee Oromoo irratti hojjate; qorannoo fi barannoo adeemsise jechuu kiyya. Inni bara 1952 keessa waayee Oromoo qorachuu fi qu’achuu jalqabe. Bara 1952 fi 1953 waggaalee lama guutuu waayee Oromoo Booranaa, Keeniyaa Kibbaa fi Bahaa keessatti qorate. Bara 1954 keessa immoo digirii isa dhumaa, kan “PhD” jedhamu waayee-dhuma Oromoo irratti qorachuun argate. Barumsi isaa barumsa xinaadaa (“anthroplology“) waan taheef, aadaa fi seenaa saba Oromoo irratti jireenya isaa guutuu qorannoo fi barsiisa adeemsise. Inni fira Oromoo callaa otoo hin taane, fira uummatoota Afrikaa teenyaa kanneen birootisi. Hubaddhaa! Oggaa inni waayee aadaa fi seenaa keenyaa qorachuuf eegalu, uummatoonnii fi saboonni Afrikaa garri dhibbayyaa 95 (“95%“) ol tahan harqoota gabrummaa warra Oroppaa jalatti argamuuyyu. Biyyi nama nama caaluu kun, biyyi Dr. Paxter tan Biritaaniyaa Guddoo jedhamtu: “Impaayera Biritaaniyaa-tti biiftuun gonkumaa hin lixxu” (“the sun never sets on the British Empire“), jechuun warri Biritaanii Guddoo tun of-waamuyyu.
Amma as irratti yoon waayee nama akkuma Dr. Baxtrer umurii isaa guutuu waayee uummata obbolaa keenyaa, waayee Somalee fi waayee Oromoo irratti qorate, innis amma kan addunyaa tana irratti hin argamnee yoon isiniif ibse, warri “onnee fi qalbiidhaan” Oromoo yookaan Somaalee, Sidaamaa yookaan Walaayitaa faa tahan kun hangam nu waliin dhama’aa akka turan, gariinillee ammas dhama’aatuma akka jiran nutti agarsiisa. Bara 1989 keessa “Kora Qorannoo Hortee Kuushi fi Omoo” isa magaalaa Turiinoo, Biyya Xaaliyaanii-tti godhame irratti walagarre, waan Pirof. B. W. Andrzejewski naan jedhe san jiraa kiyya dhiisitii du’aan kiyyallee waan irraanfatuu miti. Innis durii durii bara uummanni Somaalee keenya akka dullacha masqalaatti koloneeffatoota Oroppaa fi koloneefatoota gurraalee, warra Habashaatiin bitamaa jiru san irraa kaaseeti, kan Afaan Somaalee irratti qorachaa ture. Inni waayee Afaan Oromoos akka yeroon isaaf hayyametti ni qorata ture. “Taammanaa ilaa kan miidhame isin Oromootaa fi Somaalota, warra Kuush kanneen biroo fi warra Omoo callaa mitii! Nuti warri waayee keessan qorannus mee miidhamnee jirraa! Waayee keessanii fi waayee uummatoota akkum keessan miidhamanii waan qorannuuf, mootummaan Toopphiyaa nu rakkisa. Kanaaf, isinis nuuf jabaaddha-kaa! Nuti isin cinaa jirrawoo!” , naan jedhe namni akkuma Dr. Baxter raajeffatamu kun. Inni kana irrtti dabaluun: “Warra Habashaa duwwaa seetee kan nu rakkisu, kan nutti qoosu? Warrumti Oroppaa fi Ameerikaa isaan waayee warra Seem qoratan nutti qoosu. Bara dhibba kudha-sagalii fi jaatamootaa keessa: “Kora Qorannoo Toopphiyaa” isa Addis Ababaa-tti tahe irrattin, ani barreessumsa Oromoo keessaa kan walaloodhaan waayee Sheek Huseen Baalee ibsu dhiyeesseyyu. Boqonnaa bunaatii baanee oggaa deebinu, Faranjootumatu barandaa irraa dhaabatee Afaan Amaaratiin “Sheek Huseen maxxaa!” jechuun natti qoosaa ture.” Ee, namoonni dhabne kun kan akka Dr. Baxter fi Dr. Andrzejewski-in namoota jiruu fi jireenya isaanii waayee Oromoo, waayee Somaalee fi waayee uummatota Kibbaa miidhamoo kanaa taasifatan turani.
** Tarroo (“list“) barreeffamoota Dr. Baxter waayee Oromoo irratti baase, hamma tokko WQO (OSA) fi “OPride.com” waan baasaniif, mee “gadaa.com“, “ayyaantuu.com“, “OPride.com” fi “OromiyaaTimes.org” faa